BELLEVUE SEO & LOCAL SEARCH KHUDBADDA QALABKA
Bellevue SEO La-Taliyaha
Haddii ganacsiga maxalliga ah uusan ku jirin bogga koowaad ee Google, tartamayaashaadu waxay qaadanayaan in ka badan 85% macaamiishaada.
Haddii aad leedahay ganacsi maxalli ah, waxaad horeyba u ogayd sida ay muhiimka u tahay in lagu kala sarreeyo natiijooyinka raadinta maxalliga ah. Hadda oo internetka uu noqday isha aasaasiga ah ee macaamiisha ay u weeciyaan macluumaadka ganacsiga maxalliga ah, in aan lagu soo bandhigin raadinta maxalliga ah waxay la mid tahay inaysan ka jirin internetka.
Baadhitaannada maxalliga ahi waxay sababaan 50% raadiyeyaasha guurguura inay booqdaan meheradaha maxalliga ah maalmo gudahood. Xitaa ka sii muhiimsan ayaa ah in Google ay bedeshay raadinta algorithm si ay u siiso qiimeyn sare bogagga internetka ee loogu talagalay taleefannada gacanta.
96% macaamiisha ayaa adeegsada internetka markay baarayaan wax soo saarka iyo adeegyada deegaanka.
94% dhammaan dadka isticmaala taleefannada casriga ah waxay raadsadeen macluumaad maxalli ah.
Lahaanshaha degel websaydh u ah ganacsigaagu waa lagama maarmaan, laakiin boggaaga ayaa u baahan in lagu wanaajiyo waxa macaamiishaada maxalliga ahi ay raadinayaan. 36% macaamiisha ayaa sheegaya in websaydh si fiican loo qaabeeyey uu ganacsiga maxalliga ah ku siinayo kalsooni badan.
32% boqolkiiba macaamiisha waxay u badan tahay inay la xiriiraan ganacsi maxalli ah haddii ay leeyihiin degel.
98% ee raadinta waxay doortaan ganacsi ku yaal bogga mid kamid ah natiijooyinka ay helaan.
88% boqolkiiba macaamiisha ayaa la tashanaya dib u eegista khadka tooska ah intaysan iibsan adeegyada maxalliga ah
The Google 3-Xidhmo waxay ka muuqataa meesha ugu sareysa ee 93% ee raadinta iyada oo ujeedadu tahay maxalliga ah. Maaddaama Google ay hoos u dhigtay dhibcaha ugu sarreeya toddobo illaa seddex waa lagama maarmaan in meheraddaada maxalliga ah ay noqoto SEO si loo hagaajiyo si loo gaaro meelaha dhibcaha leh.
Daraasada Google ee qaababka raadinta maxalliga ah waxay muujineysaa in baarayaasha maxalliga ahi ay diyaar u yihiin inay tallaabo qaadaan. Sida laga soo xigtay natiijadooda, "50% macaamiisha bilaabay raadinta maxaliga ah ee taleefannadooda casriga ah waxay booqdeen dukaan hal maalin gudahood, 34% oo ka baaray kombuyuutar / kiniin ayaa sidaas oo kale sameeyay." Tani waxay muujineysaa xiriir toos ah oo darajaynta raadinta maxalliga ahi ku leedahay taraafikada dukaanka.
Sida laga soo xigtay daraasadda Chitika, 91 boqolkiiba baarayaashu waxay doortaan ganacsi ku yaal bogga mid ka mid ah natiijooyinka raadinta. Intaa waxaa sii dheer, booska ugu horreeya ee dabiiciga ah ee bogga natiijooyinka mashiinka raadinta wuxuu helayaa boqolkiiba 33 dhammaan qasabadaha.
isenselogic.com waxay leedahay khibrad sannado ah oo ku caawinta ganacsiyada yaryar suuqgeynta internetka iyo la-tashiga SEO. Waxaan halkan u nimid inaan ka caawino sidii ganacsigaagu u guuleysan lahaa. Nala soo xiriir maanta si loo helo baaritaan bilaash ah oo ah websaydh SEO ah iyo raadinta ereyga muhiimka ah ee ganacsigaaga gaarka ah. Adeegyadeena waa la damaanad qaaday. Haddii aadan si buuxda ugu qanacsaneyn waan soo celin doonaa wixii lacag bixin ah waadna joojin kartaa adeegyadayada.
Dhiirrigelin gaar ah: Bil kasta waxaan u sameyn doonnaa bilaash adeegyo SEO ah 10 shirkadood oo maxalli ah muddo bil ah hal erey oo muhiim ah iyo hal bog oo ku habboon. Haddii aadan si buuxda ula dhicin natiijooyinkayaga ma bixinaysid. Ma jiro lacag hordhac ah ama qandaraas si aad u saxiixdo.
Qiimaha qorshaha SEO or
Hubinta degelka bilaashka ah